नरेन्द्रको ‘हेर ऐनामा’ सार्वजनिक - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
नरेन्द्रको ‘हेर ऐनामा’ सार्वजनिक
काठमाडौं । गायक एबं सर्जक नरेन्द्र केसीको नयाँ साङ्गीतिक कोसेली ‘हेर ऐनामा’ बिमोचन कार्यक्रम सहित सार्वजनिक भएको छ । सो कार्यक्रम नरेन्द्र केसीको सभापतित्वमा भएको थियो भने बेपत्ता तथा छानबिन आयोगका सदस्य डा. गंगाधर अधिकारी ‘चिन्तन’ को प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो ।
“हेर ऐनामा” नामक गीतमा नरेन्द्र केसी र चर्चित गायिका शान्ति श्री परियारको स्वर रहेको छ भने नरेन्द्र केसी कै शब्द, संगीत रहेको छ । यस गीतको भिडियोलाई प्रकाश धितालले निर्देशन गरेका हुन् भने केशब राज भट्टको कोरियोग्राफी, उत्सब दाहालको छायांकन, बिकाश दाहालको सम्पादन रहेको छ । उक्त गीतको भिडियोमा पछिल्लो समयकी चर्चित नायिका गीता ढुंगाना र प्रथम क्षत्रीको अभिनय रहेको छ ।